Talaalin Covid-19 kan jalqabaa State Siouxland sadii keessa seene jira. | KWIT
Oromo News 12.14.2020
Manni fayyaa Siouxland akka jedheti Woodbury County guyyaa muraasa keessati talaali Pfizer(f-eye-zer) 2,000 ta’u hojattoota fayyaadhaf kan kenamu ta’a. Qorichi kan biraa daraja isati kan dhufufi pharmacy waliigala irrati qarqaarsi waliigala long-term care facilities kan rabsamudha.
Wayta talaalin haala moderna (muh-dern-uh) kan kenname hojattoota EMS Woodbury County 400 kan kennamuudha.
Dakota County talaali kan fudhachuuf hin karoorfamne. Garuu, hojattoota fayyaa fi warra long-term facilities hojattoota isaa ilaalcha guddaa kan argataniidha. Talaalin April keessa ummata bal’aaf kan kennamu ta’a.
Ogeessi fayyaa naanawa akka jedheti hanni talaali irrati godhamu seeran kan eegamuudha. Bilbila garee wannii dabalatee. Akka ogeessi jedhetti wayta talaalin siif kenamaa jedhanii credit card kee gafatuu, kanafuu kunii waraa hannaf godhuu. Talaalin kun awaala namaa midhamaa gudaa irra jiruf kenamaa, garuu doctoratuu murtesaa enuu akka kenamuuf.
Dura bu’aan mana fayyaa Siouxland akka jedheti seera corona virus kan kaahame sun dhukubichi akka hin baayanef baaye hojatte akka jiru himan. Guyyaa Wiyxata Wood bury County keeessati namni qabame 43 yoo tau akka dhukkubni jalqabee as walii galatti namni qabame 11,500 dha. Namni waliigalatti due 145 yoo tau Dakota County keessati kan duemmoo 52dha. Namni hospitaala galee ammo torbaan darbe kana ka gad xiqqaatedha yoo tau nama 108 irraa kara 59 xiqqaate ammati namni guyyaa jirummoo 39 qofa kan Covid-19 dhukubsatanidha.
Pirasdantii filame Joe Biden Gov. Iowa duraani Tom Vilsack yeroo lammaatif U.S Agriculture Secretary
By Fatiya Adam • Dec 10, 2020
Oromo News 12/10/2020
Pirasdantii filame Joe Biden Gov. Iowa duraani Tom Vilsack yeroo lammaatif U.S Agriculture Secretary dhaaf shuume.
Vilsack yeroo bulchiinsa Obama san waggaa saddeet dhaaf Agriculture Secrtary taee dalagaa ture akkasumas deegara paarti jaraati.
Manni fayyaa umattaa kan Iowa nama haarawa corona virus due 99 dabalamuu isaa gabaase, waliigalagtti akka state namni due 3,120 gaheera. State torbaan kana akkaata seera ittiin lakkaahan kan jijjiire dha torbaanuma kana keessa namni 399 kan dabaleedha.